Bore in the sleeveb- Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: bore in the sleeve bearing for the new shaft (Engels - Burmees)
These studies have laid the foundation for the new concept that bats host emerging human pathogens.
ဤလေ့လာမှုများသည် လင်းနို့များသည် လူများအား ‌‌ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည့် ရောဂါပိုးများအား သယ်ဆောင်သည့် လက်ခံသတ္တဝါများဖြစ်သည်ဆိုသော ယူဆချက်အသစ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၊ ထာဝရဘုရားကို အမှီပြု ၍ ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုကြလော့။ ထောမနာပြုခြင်း အကျင့်သည် သဘောဖြောင့်သောသူတို့နှင့် ထိုက်တန် လျောက်ပတ်ပေ၏။
ယောဟန်သည် တော၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအဘို့အလိုငှါ နောင်တနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဗတ္တိဇံတရားကို ဟောလျက်ပေါ်ထွန်း၏။
ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်၍ ထာဝရအသက်အလိုငှါ၊ ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်၏ ကရုဏာတော်ကို မြော်လင့်၍ နေကြာလော့။
လှေမူကား အိုင်အလယ်၌ရှိ၍ လေမသင့်သောကြောင့် လှိုင်းတံပိုးလှုပ်ရှားခြင်းကို ပြင်းစွာရ၏။
ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ၏နာမတော်အဘို့ အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှါ၊ ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည် အကြံရှိသောအခါ၊
ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ၏နာမတော်အဘို့ အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှါ၊ ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည် အကြံရှိသောအခါ၊
ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးကို ချောက်လှန့်အံ့ သောငှါ ထတော်မူသော ထိုအခါ၊ ဘုရားကိုကြောက်ခြင်း အရှိန်၊ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်အရှိန်ကြောင့်၊ ကျောက်ထဲသို့ ဝင်လော့။ မြေမှုန့်၌ ပုန်း၍နေလော့။
ဒါဝိဒ်သည် တော၌ ပုန်းရှောင်၍ နေ၏။ လဆန်းနေ့ရောက်မှ ရှင်ဘုရင်သည် စားတော်ခေါ်ခြင်းငှါ ထိုင်၏။
လူမျိုးလေးဆက်လွန်သောအခါ၊ သူတို့သည် ဤပြည်သို့ ပြန်လာကြလိမ့်မည်။ အာမောရိ အမျိုးသား တို့၏ ဒုစရိုက်အပြစ်သည် မစုံလင်သေးဟု အာဗြံအား မိန့်တော်မူ၏။
ထိုနည်းတူ၊ ဥပုသ်နေ့နှင့် လဆန်းနေ့၌ ပြည်သူ ပြည်သားတို့သည် ထိုတံခါးဝနားမှာ ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်တွင် ဦးညွတ်ချရကြမည်။
ကွပ်မျက်ရာချိုင့်၌ လူများ စည်းဝေးလျက်၊ လူများစည်းဝေးလျက်ရှိကြ၏။ ကွပ်မျက်ရာချိုင့်၌ ထာဝရ ဘုရား၏ နေ့ရက်သည် ရောက်လုနီးပြီ။
ဥာဏ်ကောင်းသောသူသည် ပညာစကားကို ပြောတတ်၏။ ဥာဏ်မဲ့သောသူ၏ကျောအဘို့မူကား ကြိမ်လုံးရှိ၏။
ယောရှဖတ်သည် ဗိမာန်တော် တန်တိုင်း သစ်ရှေ့၊ ယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သား စည်းဝေးရာ ပရိသတ်အလယ်၌ရပ်လျက်၊
This review attempts to summarize the research progress in the new and swiftly developing subject area.
ဤသုံးသပ်ချက်သည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြောင်းအရာနယ်ပယ် အသစ်အပေါ် လုပ်ဆောင်နေသည့် သုတေသနကို အနှစ်ချုပ်ရန် ကြိုးစားထားသည်။
The concentration of antibodies in the blood is usually low, and the demand for the plasma is large to treat critically ill patients.
သွေးတွင်း ရောဂါကာကွယ်သော ပဋိဇီဝပစ္စည်း ပါဝင်မှုများ ပုံမှန်အားဖြင့် နည်းပြီး အသည်းအသန်ဖျားနာနေသည့် လူနာများကို ကုသရန် သွေးရည်ကြည်အများအပြား လိုအပ်ပါသည်။
Facebook users in the Philippines removed their profile pictures last August 30 to demand justice for the victims of enforced disappearances.
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)အသုံးပြုသူများသည် လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လ (၃ဝ)ရက်နေ့က ဖိနှိပ်ခံ ပျောက်ဆုံးမှုမှ ဓားစာခံများအတွက် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအလို့ငှာ မိမိတို့ ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)မှ ဓာတ်ပုံများကို ဖြုတ်ချခဲ့ကြသည်။
tagalog ng otherwise (Tagalog>Engels)ancok amo (Indonesisch>Chinees (Vereenvoudigd))eau de toilette spray (Frans>Tamil)indien u nog vragen heeft verneem ik dat graag (Nederlands>Engels)portasapone (Italiaans>Engels)irregularly (Engels>Chinees (Vereenvoudigd))ymdrech dda (Engels>Wels)nga mihi meaning (Maori>Engels)you are yummy (Engels>Swahili)gift wrap (Engels>Nederlands)saw (Engels>Telugu)암 (Koreaans>Armeens)whakakakahuria (Maori>Hebreeuws)b p pechrबिपि पिचर bp picture (Hindi>Engels)auguri di buon compleanno (Italiaans>Latijn)accept or not (Engels>Portugees)miracolosamente (Italiaans>Arabisch)bhabhi ki chut ki chudai (Hindi>Engels)identificáveis (Portugees>Italiaans)intraperitoneal (Engels>Duits)subvert the paradigm (Engels>Hindi)i hate you all (Engels>Spaans)tanda lencongan di hadapan (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))respondens (Latijn>Esperanto)waste milk (Engels>Grieks)